Olee otu Nkwakọ ngwaahịa na-emetụta Ahụmịhe Ndị Ahịa | Martech Zone
Thatbọchị m zụtara MacBook Pro mbụ m bụ ụbọchị pụrụ iche. Echetara m mmetụta etu esi wuo igbe ahụ, etu esi gosipụta laptọọpụ mara mma, ọnọdụ nke ngwa ahụ… ha niile mere maka ahụmịhe pụrụ iche. Anọgidere m na-eche na Apple nwere ụfọdụ n'ime ndị kacha mma nkwakọ ngwaahịa na ahịa.
Oge ọ bụla m unbox ọ bụla nke ngwaọrụ ha, ọ bụ ihe ahụmahụ. N'ezie, nke ukwuu nke na ọ na-ewute m nke ukwuu mgbe m na-echekwa igbe ndị ahụ ma ọ bụ tụfuo ha. N'iji ya tụnyere ihe ndị ahụ na-enweghị ntụpọ na-achọ ngwa enyemaka mbụ na mkpa titanium… M na-ewe iwe tupu m nweta ngwaahịa ahụ na nkwakọ ngwaahịa ahụ!
Mmetụta mbụ nke ngwaahịa ọ bụla na onye na-azụ ahịa bụ nkwakọ ngwaahịa ahụ, ọ ga-abụrịrị na ha na-atụ anya ngwaahịa maka ọdịdị nke nkwakọ ngwaahịa ahụ, yabụ ịnweta ya ziri ezi bụ ihe dị mkpa! Ọ ga-amasị anyị inwe ike ikwu na ndị na-azụ ahịa na-azụ ihe ha dabere na ngwaahịa, mana anyị na-agha ụgha, a na-ahụ ihe nkwakọ ngwaahịa iji rụọ nnukwu ọrụ na mkpebi ha. Ngwọta Nkwakọ ngwaahịa, The Science Behind ikenyeneke mbiet Packaging
Ebumnuche nke ọma, nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịgbanwe ahụmịhe ndị ahịa niile nke ngwaọrụ. Na ihe omuma a, Ntuziaka Nkwakọ ngwaahịa na-akọwa:
Mmetụta - Mmetụta uche na-ekere òkè dị mkpa na ahụmịhe ngwaahịa niile, nke na-amalite ozugbo ndị na-azụ ahịa nwetara ngwaahịa ahụ n'aka.
echiche - Nnyocha na-egosi na nkọwa nke nkwakọ ngwaahịa ahụ na-enyere mmadụ aka ikpebi ihe ngwaahịa a ga-adị. Na nhụta mbụ nke ngwaahịa a, ụbụrụ na-achọpụta ma ọ dị mma ma ọ bụ na ọ adịghị mma.
Anyị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a na-eweta ngwa ahịa okomoko na ahịa. Anyị na-arụ ọrụ ịkụ ọkpọ, ihe ndị dị n'ime, onyinye a na-atụghị anya ya, na ekele ndị onye mepụtara dere-aka. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka ndị na-eri ahịa nwee mmetụta pụrụ iche tupu ha eburu ma were ngwaahịa ahụ. Anyị na-arụ ọrụ na otu anyị ga - esi tinye ihe na - esi isi na igbe ahụ iji weta ahụmịhe ahụ.
The Science Behind ikenyeneke mbiet Packaging
Tags: nkwalite ngwaahịa nkwadofechaa nkwakọokomoko ngwaahịankwakọnkwakọ ngwaahịangwaahịa ika mmataakara ngwaahịanjirimara ngwaahịangwaahịa ahịangwaahịa nkwakọ ngwaahịankwalite ngwaahịangwugwu resealable